साबधान ! ग्राहकको धाराको लाइन काट्न सुरु
लहान, ७ असार । खानेपानी संस्थान लहानले लामो समयदेखि खानेपानीको महसुल नबुझाउने निजी तथा सरकारी ग्राहकको धाराको लाइन काट्न थालेको छ । पटकपटक धाराको महसुल बुझाउन पत्राचार गर्दा समेत बेवास्ता गर्दै नबुझाउने ग्राहकको धाराको लाइन काट्न थालेको खानेपानी संस्थान लहानले जनाएको छ । पहिलो चरणमा रु १० हजारभन्दा बढी महसुल बुझाउन बाँकी रहेका ग्राहकको धाराको लाइन काट्न सुरु गरेको खानेपानी संस्थानका लेखापाल बहादुरसिंह थिङले जानकारी दिनुभयो । लामो समयदेखि खानेपानीको महसुल नबुझाएको भन्दै खानेपानी संस्थानले लहानस्थित रामकुमार उमाप्रसाद स्मारक अस्पतालको नाममा...
दूधको मूल्य घट्दैन– दुग्ध विकास बोर्ड
रत्ननगर (चितवन), ७ असार । दुग्ध विकास बोर्डले भूकम्पकै कारण दूधको मूल्य नघट््ने भन्दै किसानलाई आश्वस्त पारेको छ । दूध किसानको समस्या बुझ्न चितवन आउनुभएका बोर्डका कार्यकारी निर्देशक बाबुकाजी पन्तले दूधको मूल्य घट्न नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । होलिडे गर्नु नपर्ने वातावरण निर्माणमा बोर्ड लागेको उहाँले बताउनुभयो । सञ्चालन गर्न कठिनाई भइरहेका उद्योगलाई पब्लिक प्राइभेट साझेदारीको अवधारणामा सञ्चालन गर्नेतर्फ बोर्डको ध्यान गएको उहाँको भनाइ थियो । किसानले सोधेको जिज्ञासामा कार्यकारी निर्देशक पन्तले ‘चितवन मिल्क’मा सरकारी निजी साझेदारीको अवधारणा...
आजबाट जग्गा प्लटिङ रोक्का
चितवन, ६ असार । भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग र भरतपुर उपमहानगरपालिकाले पत्राचार गरेपछि मालपोत कार्यालय चितवनले प्लटिङ कार्यमा पूर्णरुपमा रोक लगाएको छ । कार्यालयले आजबाट जग्गामा बाटो खोलेर प्लटिङ गर्ने कार्यलाई रोकेर घडेरीको रजिस्ट्रेसन पारित खुल्ला गरेको छ । कार्यालयका प्रमुख टङ्कप्रसाद उपाध्यायका अनुसार भरतपुर उपमहानगरपालिकाले धम्कीको शैलीमा पत्राचार गरेपछि कर्मचारीमा अन्योल पैदा हुँदा शुक्रबार कुनै काम हुन नसकेको भए पनि विभागमा सोको जानकारी गराएपछि विभागको निर्देशनअनुसार काम गर्न भनिएकाले आजबाट प्लटिङबाहेकका काम सुरु गरिएको बताउनुभयो...
भूकम्पपीडितको उद्धार कसरी ?
वैशाख १२ गतेको महाभूकम्पपछि सारा विश्वको ध्यान नेपालमा केन्द्रित भयो । भूकम्पबाट पीडित परिवार तथा प्रभावित क्षेत्रसम्म कसरी पुग्ने र त्यो ठाउँमा गई कसरी उद्घार गर्ने भन्नेतर्फ पनि आईटीसँग सम्बन्धित विज्ञहरूको ध्यान पनि गयो । एक प्रकारले यो भूकम्पले आईटी क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई पीडितहरूको उद्धारका लागि नयाँ तरिकाहरू खोज्नसमेत बाध्य तुल्यायो । भूकम्पपछिको अवस्थामा विज्ञहरूलाई प्राय: जसो सडक, भवन, आदिको सही नाप नक्सा नै पत्तो लगाउन गाह्रो भैरहेको अवस्था थियो भने, त्यसमाथि सही स्थान र Longitude Latitude पत्ता लगाउन नै उनीहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुन पुग्यो ।...
क्यास कम्प्युटर विज्ञानको महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो, जुन प्रत्येक कम्प्युटरमा विभिन्न रूपमा देखा पर्छ । कम्प्युटरमा मेमोरी क्यास, हार्डवेयर–सफ्टवेयर डिस्क क्यास, पेज क्यास आदि हुन्छन् । भर्चुअल मेमोरी पनि क्यासिङकै एउटा रूप हो । कम्प्युटरको मेमोरी सब–सिस्टममा आधारित प्रविधि नै क्यास हो । क्यासको मुख्य उद्देश्य कम्प्युटरलाई थोरै मूल्यमा पनि बढी शक्तिशाली बनाउनु हो । क्यास खोज्न (सर्च) लगाउने समयलाई अहिलेका आधुनिक हार्डवेयरले शून्यमा झारिसकेका छन् । क्यास प्रविधि सानो तर छिटो मेमोरी हो, जसलाई ठूलो तर ढिला मेमोरीलाई छरितोसँग सञ्चालन गर्न ऊर्जा प्रदान...
के तपाइँलाई थाहा छ तपाइँको फेसबुक अकाउण्ट चलाउनका लागि कतिपय ब्यक्तिलाई पासवर्ड जरुरत नै पर्दैन । थाहा छैन भनेपनि यो सत्य हो । फेसबुकले आफ्ना कतिपय कर्मचारीलाई फेसबुक प्रयोगकर्ताहरुको अकाउण्ट खोल्न पासवर्ड नै आवश्यक नपर्ने अधिकार दिएको छ । प्रविधीसँग सम्बन्धित रिपोर्ट प्रकाशित गर्ने ‘भेन्टरबीट’ नामक वेवसाइटका अनुसार फेसबुकले हालै मात्र आफ्ना कतिपय कर्चारीलाई प्रयोगकर्ताहरुको फेसबुक अकाउण्ट पासवर्डविना नै खोल्न सक्ने सुविधा दिएको स्वीकार गरेको हो । यद्यपी कुनै पनि प्रयोगकर्ताको सहयोगका लागि मात्र यस्तो गर्न सक्ने तर कुनै दुरुपयोग भएमा कारवाहीको...
भूकम्प मापन केन्द्र डिजीटल प्रविधिमा जाने
खानी तथा भूगर्भ विभाग अन्तर्गत रहेका २१ वटै भूकम्प मापन केन्द्र डिजीटल प्रविधिमा जाने भएका छन् । फ्रान्सको भूकम्प सम्बन्धी अध्ययन गर्ने संस्था डिपार्टमेन्ट एनलाइस सर्भिलेन्स इन्भारमेन्ट का अध्यक्ष वेनेडीक गीलपाथको नेतृत्वमा आएको चार सदस्यीय टोलिले उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतको कार्यकक्षमा भएको भेटवार्तामा उक्त विषयमा बुधबार छलफल भएको हो । खानी तथा भूगर्भ विभागका उप महानिर्देशक डा. सोम सापकोटाका अनुसार उद्योगमन्त्री बस्नेत र फ्रान्सको उक्त टोलिबीच खानी तथा भूगर्भ विभाग अन्तरगत रहेका सबै राष्ट्यि भूकम्प मापन केन्द्रलाई आधुनिकरण गर्ने विषयमा छलफल भएको...
सामसुङ ग्यालेक्सी एस सिक्स र एस सिक्स एज सार्वजनिक
सामसुङ ग्यालेक्सी एस सिक्स र ग्यालेक्सी एस सिक्स एज नेपाली बजारमा आएको छ । बिहीवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच उक्त मोवाइल सार्वजनिक गरिएको हो । यो फोनमा विश्वको नविनतम प्रविधि समावेस गरिएको सामसुङ इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी लिमिटेडका एचएचपी डिभिजन प्रमुख प्रणयरत्न स्थापितले बताए । उनले कुनै पनि फोनले यस्तो प्रविधि प्रयोग नगरेको दावी गरे । फोनमा गुरिला ग्लासका प्रयोग गरिएकोले खस्दा पनि नफुटने जनाईएको छ । ग्यालेक्सी एस सिक्स र एस सिक्स एज ग्यालेक्सी एस फाइभको तुलनामा १ दशमलव ५ पटक छिटो चार्ज हुने कम्पनीको दावी छ । आकर्षक देखिने फोन पातलो तथा हलुका रहेको...
युवतीको बोल्ड पोष्ट फेसबुकले किन डिलिट गर्‍यो?
फेसबुकमा केटीहरुलाई चिनेका केटाहरुको सन्देश आउनु सामान्य कुरा हो। यीमध्ये धेरै साथीको प्रस्ताव गरिएका हुने गर्छन्। यस्ता सन्देशहरु कहिल कहीँ अस्लिल पनि हुन्छन्। यस्तै एक नचिनेका पुरुषको सन्देशलाई लिएर दिल्ली विश्वविद्यालयकी एक विद्यार्थीले जवाफ लेखेकी छिन्, जुन अहिले विश्वमै चर्चित बेनको छ। उनले दिएको जवाफ सोसल मिडियामा भाइरल भएको छ। पहिला उनले ती व्यक्तिलाई जवाफ दिइन् र त्यसको स्क्रिनसट आफ्नो वालमा पोष्ट गरिन्। के छ जवाफमा? फेसबुकमा ती पुरुक्षले छात्रालाई सेक्सी भन्दै अश्लिष टिप्पणी गरेका थिए। जवाफमा उनले भनिन्, 'मैले तपाइँजस्ता धेरै घटिया...
क्यान्डी क्रसले हैरान हुनुहुन्छ? यसो गर्नुस्!
क्यान्डी क्रसको नोटिफिकेशनले हैरान हुनुहुन्छ? त्यसो हो भने तपाईँका लागि फेसबुकले खुसीको खबर ल्याएको छ। फेसबुकलले त्यस्ता रिक्वेस्ट र रिमान्डरलाई ब्लसक गर्ने फिचर ल्याएको छ। फेसबुक प्रयोगकर्ताले क्यान्डी क्रसको नोटिफिकेशनले आजीत भएको भन्दै गुनासो गरेपछि फेसबुकले यसबाट छुटकारा पाउने विधिको विकास गरेको हो। जसको माध्यमबाट प्रयोगकर्ता चयनले फेसबुक प्रयोग गर्न सक्नेछन्। यसका लागि फेसबुक प्रयोगकर्ताले आफ्नो फेसबुक खाताको सेटिङ मिलाउनुपर्ने हुन्छक। प्रयोगकर्ताले सेटिङमा दिइएको 'ब्लकिङ' अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि आउने 'ब्लक एप...
भूगर्भ विभागको भूकम्पबारे सूचना दिने एप
काठमाडौं–खानी तथा भूगर्भ विभागले भूकम्पबारे सूचना दिने ‘नेपाल अर्थक्वेक अपडेट्स्’ नामक मोबाइल एप सार्वजनिक गरेको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार ४ रेक्टरस्केलभन्दा माथिका भूकम्प जानासाथ भूकम्पको सबै सूचना मोबाइल एप्मा अपडेट हुनेछ ।शनिबार एक कार्यक्रमकाबीच उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले उक्त एपको शुभारम्भ गरे। साथै भूकम्पबार जानकारी लिन शुल्क नलाग्ने टेलिफोन नम्बर(टोल फ्री नम्बर) १६१८०१४४१०१४१ को समेत शुभारम्भ गरे। खनी तथा भूगर्भ विभागले भूकक्पबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन शनिबार ल्याएको एप यहाँबाट डाउनलोड गर्नुहोस्ः https://play.google.c...
आउँदैछ नौ सय रुपैयाँको कम्प्युटर
नौ सय रुपैयाँमा कम्प्युटर आउँछ ? बिग्रेको कवाडी माल भए आउला, सद्दे त कहाँ आउनु भन्नुहोला । तर होइन, अब निकट भविष्यमा केवल नौ सय रुपैयाँमा तपाइँले साँच्चीकै सद्दे र नयाँ कम्प्युटर नै किन्न सक्नुहुनेछ । अमेरिकाको क्यालिफोर्नियास्थित एक कम्पनीले क्रेडिट कार्ड जत्रै आकारको निकै सस्तो कम्प्युटर निर्माण गरिरहेको छ । उक्त कम्प्युटरको मूल्य केवल ९ डलर अर्थात् झण्डै ९ सय रुपैयाँ हुनेछ । नेक्स्ट थिंग नामको कम्पनीले यस्तो सस्तो तथा निकै सानो आकारको कम्प्युटर निर्माणको आफ्नो परियोजना अन्तिम चरणमा पूराएको छ अनि यसका लागि थप ५० हजार डलर आवश्यक रहेको जनाएको छ । उक्त...
एउटै कार्डबाट जीएसएम र सीडीएमए मोबाइल रिचार्ज
६ जेठ, काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको जीएसएम र सीडीएमए मोबाइल एउटै कार्डबाट रिचार्ज गर्न सकिने भएको छ । टेलिकमले ‘कार्ड एक, सेवा अनेक’ नारासहित एनटी रिचार्ज कार्ड बजारमा ल्याएको छ । एनटी रिचार्ज कार्डबाट जीएसम तथा सीडीएम प्रिपेड मोबाइल रिचार्ज गर्न सकिन्छ । साथै, यही कार्डबाटै सीडीएमए पोष्टपेड मोबाइलको महशुल भुक्तानी गर्न सकिने टेलिकमले जनाएको छ । टेलिकमले ५०, १००, २००, ५०० र १००० रुपैयाँ दरका एनटी रिचार्ज कार्ड बजारमा ल्याएको छ । यो रिचार्ज कार्डबाट जीएसएम पोष्टपेड मोबाइलको बिल भने भुक्तानी गर्न सकिने छैन् । एनटी रिचार्ज कार्ड बजारमा ल्याएपनि टेलिकमले...
मुस्लिम विरोधी फिल्म नरोक्न युट्युबलाई आदेश
मुस्लिम विरोधी भनिएको फिल्म ‘इनोसेन्स अफ मुस्लिम’ यु ट्युबबाट नहट्ने भएको छ । अमेरिकाको सनफ्रान्सिस्कोस्थित पुनरावेदन अदालतले उक्त फिल्मलाई युट्युब च्यानलबाट नहटाउन गुगललाई आदेश दिएको हो । यसअघि प्रारम्भिक अदालतको ३ सदस्यीय इजलासले उक्त फिल्मलाई यु ट्युबबाट हटाउन आदेश दिएको थियो । तर प्रारम्भिक अदालतको आदेशलाई पुनरावेदन अदालतले उल्टाएको छ । ११ न्यायाधीश संलग्न इजलासले यु ट्युबमार्फत उक्त फिल्म देखाउनमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने फैसला गरेको हो । इनोसेन्स अफ मुस्लिम नामक हलिउड फिल्ममा मुस्लिम धर्मका प्रवर्तक मोहम्मदलाई बालयौनाकर्षण...